Shirwaynaha caalamiga ah ee WTTC 2022 Manila ayaa dib loo dhigay
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » ururada » Shirwaynaha caalamiga ah ee WTTC 2022 Manila ayaa dib loo dhigay
Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa ku dhawaaqay taariikho cusub shir madaxeedka 2022 ee Manila.
2021 WTTC waxay qabatay shirkii dalxiiska ee ugu horreeyay intii lagu jiray masiibada COVID ee Cancun, Mexico.
Manila waxaa loo dejiyay sidii goob loogu talagalay dhacdada 2022.
Maanta Julia Simpson, Madaxa WTTC & Maamulaha Guud waxay tiri: "Sida wadamada adduunka oo dhan ay bilaabeen inay furaan albaabka safarka, waxaan qaadanay go'aan ah inaan dib u dhigno shir-madaxeedka caalamiga ah dhowr toddobaad oo gaaban. Tani waxay awood u siin doontaa kaqeybgalayaal badan oo caalami ah inay nagu soo biiraan Manila oo ay gacan ka geystaan ​​hagida iyo hogaaminta waaxda inta aan u socono soo kabashada dhaqaalaha.
"Kulankeena caalamiga ah waa dhacdada ugu saameynta badan Safarka & Dalxiiska ee jadwalka. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno xubnahayaga, hoggaamiyeyaasha warshadaha iyo wakiillada dowladda ee muhiimka ah oo ku shiraya Manila bisha Abriil si aan u sii wadno dadaalladayada ku aaddan soo celinta socdaalka caalamiga ah."
Bernadette Romulo-Puyat, Xoghayaha Waaxda Dalxiiska ee Filibiin ayaa tiri, "Shirka caalamiga ah ee WTTC wuxuu noo noqon doonaa fursad muhiim ah si aan u soo bandhigno diyaargarow aan u dhignay inaan aakhirka dib ugu furno booqdayaasha caalamiga ah.
“Dalxiiska ayaa had iyo jeer na siinaya fursado aan dhammaad lahayn. Dib u furista meelaha aan u socono iyo xuduudaha iyadoo ay jirto masiibada ayaa muhiim u ah joogteynta nolosha malaayiinta ku tiirsan safarka iyo dalxiiska. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono martigeliyahaaga sharafta leh ee Manila inta aan ku socono habka caadiga ah ee soo socda ee warshadaha safarka. "
Shirku waxa lagu martigelin doonaa Metro Manila qof ahaan Abriil 20-22, 2022, iyada oo dhagaystayaal caalami ah ay ku soo biirayaan gabi ahaanba.
Macluumaad dheeri ah sida kuwa ku hadla furaha ayaa lagu dhawaaqi doonaa waqti dhow.
Covid Manila Metro Manila Filibiin Dalxiiska
Warbixinta Dalxiiska Sannadlaha ah ee Kenya ayaa Muujinaysa Rajo Cusub